मनोज गजुरेलले मागे माफी – Kavrepati
Home / समाचार / मनोज गजुरेलले मागे माफी
admin September 19, 2021	समाचार Leaveacomment 66 Views
उनले लेखेको स्टाटस यस्तो छ- कमेडी च्याम्पियन २ : ‘जज’को नजरमा आफ्नै ‘जजमेन्ट’ ! कमेडी च्याम्पियनको दोश्रो सिजन सकिएको छ । हजारौंबाट सयौं, सयौंबाट दर्जनौं, दर्जनौंबाट उत्कृष्ट तीनहुँदै बिजेता घोषणा भैसकेको छ । यो बिचमा धेरै राम्रा र प्रतिभाशाली कमेडीयनहरुलाई भेट्यौं । उनिहरुलाई आफ्नो कला अनुभव सुनाउने र उनिहरुका ‘कमेडी ट्रेण्ड’ सिक्ने सुन्दर अवसर मिल्यो ।
Previous दाङमा पक्राउ परेका यी महिला जस्लाई धनि र राम्रा युवक त देख्न नै हुन्थेंन ..!
Next काठमाडौंमा ट्याक्सी भित्र चढेका युवायुवतीले जे गरे…..